Muxuu Kaamil-Worn Cameras u caawiyaa Maamulka Sharciga? | Xalka OMG
Muxuu Kamarada-Worn Cameras u caawiyaa Maamulka Sharciga?
Teknolojiyadda waxaa lagu qeexay sida loo dejiyey xirfadaha, aqoonta, ama xirfadaha loo adeegsado walxaha aan dabiiciga ahayn si loo gaaro go 'aan; Laakiin dhanka amniga, waa maxay dhamaadka? Waxay u muuqataa inay iska cadahay yareynta dembiyada, si kastaba ha noqotee, abuurkiisa waligeed kuma xirna dhamaadkaan.
Tan iyo bilowgii taariikhda, bini-aadamka wuxuu doonayey inuu ka gudbo caqabadaha jahliga taasina waxay horseeday horumar farsamo oo aasaasi ah, laakiin waxay lama huraan u tahay horumarka xiga, sida socodka, biraha, iwm.
Kaamirooyinka jirka waa duubis loogu talagalay in lagu xidho lebbiska sarkaalka xoojinta sharciga, oo bixinaya duubis maqal iyo muuqaal ah ee dhacdooyinka laga soo arko aragtida, marka lagu gudajiro howlaheeda.
Hay'adaha fulinta sharciga waxay adeegsadaan kaamirooyinka muuqaalka jirka (CVC) si ay u duubaan codadka iyo muuqaallada waqtiga dhabta ah inta lagu jiro dhacdooyinka iyo is-dhexgalka xubnaha bulshada, markhaatiyada iyo tuhmanayaashu inay markaa u istcimaalaan qeyb ka mid ah baaritaanka iyo inay aruuriyaan caddeyn. Rikoorrada lagu sameeyay CVC waxay ku darayaan qiimaha caddeynta la soo aruuriyay; waa inaan loo arkin inay yihiin isha kaliya ee caddaynta.
Nidaamka HVAC wuxuu ka kooban yahay kamarad yar oo ku xiran dharka booliiska ama muraayadaha muraayadaha ama xirtaan koofiyad, kaasoo diiwaangeliya codadka iyo sawirrada inta ay socdaan howlgalka sarkaalka booliisku la leeyahay dadweynaha. Macluumaadka dhijitaalka ah ee duuban ayaa diiwaan gelinaya dhacdooyinka laga soo qaaday aragtida sarkaalku ku leeyahay waxqabadka waajibaadkiisa.
CAC waxaa loogu talagalay inay si furan u diiwaangeliso diiwaannada kaasoo bixin doona xog la isku halleyn karo, sax ah oo aan dhameystirnayn oo ku saabsan dhacdooyinka ay ku lug leeyihiin xubnaha labbiska hay'adaha sharci fulinta. Ujeeddada dhaqankan ayaa ah in kor loo qaado daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka haddii su’aalo ama walaacyo soo baxaan ama haddii eedeymo la soo gudbiyo ay ka dhaceyso shil, iyo in la keeno caddeyn dacwad oognimo haddii ay dhacdo dhacdo. waxay ahayd inay la socdaan falal dambiyeedyo.
Hay'adaha fulinta sharciga ayaa sameeyay daraasad suurta gal ah oo ku saabsan adeegsiga CVC oo ay kujirto dib u eegis qotodheer arrimaha qarsoodiga quseeya iyo arrimaha sharciga ama siyaasada. Qalabka CAC iyo teknolojiyadda ayaa si dhakhso leh isu beddelaya, waxayna wakaaladu si joogto ah dib-u-eegis ugu sameeyaan siyaasadaha, nidaamyada, iyo qalabka si loo hubiyo in ku dhaqanka dhaqangelinta sharciga ugu wax ku oolka badan la isticmaalo. Qaybtaan shaqada waxaa ka mid ah cilmi baarista iyo tijaabooyinka tijaabada si loo tijaabiyo teknolojiyadda cusub. Hadafka hay'adaha sharci fulinta ayaa ah in la siiyo xubnaha safka hore qalab tikniyoolajiyadeed oo sareeya iyo aaladaha warbaahinta bulshada si kor loogu qaado awoodooda wax looga qabanayo xaqiiqooyinka cusub iyadoo la xaqiijinayo amniga shacabka iyo booliska.
Tijaabooyinka ayaa sidoo kale si sax ah u aqoonsaday astaamaha CAC si ay sifiican ugu qiimeeyaan baahiyaha hay'adda fulinta sharciga iyada oo loo marayo soo celinta dhacdooyinka ku lugta leh isticmaalka xoogga. Iyada oo ku saleysan shuruudaha qiimeynta iyo cabiraadaha ay bixiyeen duruufaha soo noqnoqonaya, waxaa suurta gal ah in diiradda la saaro isbadallada gaarka ah ee la xiriira dhammaan dhinacyada isticmaalka xoogga jirka si loo go'aamiyo meesha ugu wanaagsan ee lagu dhejiyo kaameeraha sarkaalka booliiska ah ee gudanaya howlahiisa. astaamaha ay CVC-gu lahaan karaan si ay u buuxiyaan shuruudaha aruurinta caddaynta.
Adeegyada booliisku waxay u isticmaalaan tiknolojiyad cusub si ay bilayska iyo xubnaha dadwaynaha ee ay ula macaamilaan ula xisaabtamaan tallaabo kasta. CVC-gu wuxuu bixiyaa daahfurnaan iyo isla xisaabtan ballaaran oo ku wajahan dhammaan dadka ay quseyso wuxuuna soo bandhigayaa sawir guud oo ku saabsan waxa ay saraakiisha booliisku la kulmaan inta badan xaaladaha adag ee aadka u dhaqdhaqaaqa. Mashaariicda sidan oo kale ah ayaa qiimeyn kara oo go’aamin kara qiimaha lagu daray aaladaha booliiska cusub. Iyada oo ah ciidan boolis casri ah, hay'adaha sharci fulinta waxay si joogto ah u baaraan oo u qiimeeyaan tikniyoolajiyadda cusub si ay u gutaan waajibaadkooda ah inay badbaadiyaan dadka rayidka ah. Ujeeddada qaabkan ayaa ah mid la mid ah - in la siiyo xubnaha hay'adaha fulinta sharci fulinta aaladaha ay u baahan yihiin si ay uga gudbaan caqabadaha la xiriira deegaanka boliiska ee hadda ka jira deegaan weligiis is beddelaya.
Khataraha gaarka ah ayaa la cadeeyay inta lagu gudajiray Qiimaynta Saamaynta Asturnaanta (PIA), waxaana la soo jeediyay talooyinka soo socda si loo yareeyo.
Hayadaha fulinta sharciga ayaa soo saari doona siyaasad lagu hubinayo haynta, kaydinta, iyo kaydinta diiwaanada lagu sameeyay CVC;
Hayadaha fulinta sharciga ma diiwaangelin doonaan dhammaan wada shaqeynta iyo wada hadalka ay la yeeshaan xubnaha dadweynaha;
Marka xubnaha wakaaladu u adeegsadaan CVC qaab dhismeedka sharciga ah ee waajibaadkooda, si furan ayey u furi doonaan
Intii caqli gal ah, xubnaha hay'adaha fulinta sharciga waxay kula talin doonaan muwaadiniinta markii filim la duulayo;
Dhamaadka wareeg kasta, dhammaan muuqaallada fiidiyowga waxaa lagu soo dari doonaa wakaaladaha loo oggolaaday aaladda keydka ee xafidan si loo shaaciyo, xafididda, iyo tuuridda;
Muwaadiniintu waxay weydiisan karaan inay arkaan macluumaadkooda shaqsiyadeed. Codsiyada helitaanka diiwaangelinta CAC ee lagu sameeyay Helitaanka Sharciga Macluumaadka iyo Sharciga Khaaska ah waxaa lagu soo gudbin karaa bogga shabakadda ATIP.
Adeegsiga CAC-yada waxaa loo gudbin doonaa guud ahaan dadweynaha, gaar ahaan meelaha lagu meeleeyo kaamerooyinka, iyo gudaha gudaheeda xubnaha wakaaladaha fulinta sharciga si loo ogeysiiyo siyaasadaha iyo dhaqamada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira.
CACs waxaa loo isticmaalaa in lagu aruuriyo caddeyn loogu talagalay baaritaanka dambiyada iyo in la fuliyo hay'adaha fulinta sharciga ee ka go'an sameynta xiriirka iyada oo la dhiirrigelinayo guryo aamin ah iyo bulshooyinka amaan ee dalka oo dhan. Adeegsiga CAC-yada ayaa sidoo kale taageeri doona waajibaadka hay'adaha fulinta sharciga ee ka hortagga dambiyada, baarista dambiyada, dhawrista nabadda iyo kala dambeynta, xoojinta sharciga, iyo gacan ka gaysashada amniga qaranka. , in la hubiyo badbaadada saraakiisha dawladda, booqashada masuuliyiinta, iyo xubnaha hawlgallada shisheeye, iyo in la bixiyo adeegyo taageero hawleed oo muhiim ah wakaaladaha fulinta sharciga. Markay lashaqeeyaan dadweynaha, xubnaha waxay u adeegsan doonaan CACs go'aankooda, taas oo kuxiran xeerarka is dhexgalka bulshada. Hay'adaha fulinta sharciga waxaa ka go'an inay ilaaliyaan macluumaadka shaqsiyadeed ee la soo aruuriyey oo ay had iyo jeer dib u eegaan siyaasadaha iyo qawaaniinta si loo hubiyo inay u hoggaansan yihiin sharciga federaalka.
Muxuu Kamarada-Worn Cameras u caawiyaa Maamulka Sharciga? ahaa kii ugu dambeeyey: December 2nd, 2019 by admin
2890 Wadarta Views 18 Views Maanta
ക്യാമറകൾ തുടക്കം (1)
5 Waxyaabaha Aad Ka Ogaaneyso Kaamirooyinka Jirka Booliiska
Tilmaamaha Isticmaalka Kaameerada-Worn Cameras
Faa'iidooyinka Kamaradaha Jirka by Warshadaha
Kaamirooyinka Ciidamada Booliska iyo Asturnaanta
Isticmaalka Kaamerooyinka Jirka-Worn Cameron ee Warshadaha